Sage sy Libra 2 no Kobo eReaders vaovao miaraka amin'ny Bluetooth | Vaovao Gadget
Kobo (nataon'i Rakuten) dia manohy miloka amin'ny tsenan'ny e-book, izay nahitanay ny fiantraikany lehibe tamin'ny fitomboany, ankoatry ny zavatra hafa noho ny fahombiazan'ny fandefasana ny Kobo Elipsa, fitaovana hybrid revolisionera izay ny fivarotana efa nihoatra ny nandrasana.
Rehefa avy nisitrika lalina tao amin'ny Kobo Elipsa, ny orinasa dia manolo-tena hanavao kely ny isan-karazany ny vokatra ary amin'izany manome antsika ny vaovao Kobo Libra 2 the Kobo Sage, vokatra roa miaraka amin'ny fanatsarana ny haavon'ny fitaovana ary mankalaza ny fahatongavan'ny teknolojia Bluetooth. Andao jerena ity fampisehoana Kobo vaovao ity.
Ny fitaovana vaovaon'i Kobo dia mankarary ny seho E Ink Carta 1200 mirefy 8-inch miaraka amina fanapahan-kevitra manome 300 hakitroka isaky ny santimetatra. Ny fitehirizana dia mankany amin'ny 32GB tsy mampino (ampy ho an'ny asanao sy ny atiny) mihazakazaka izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny processeur 1,8 GHz. Amin'izany fomba izany dia manitatra ny katalaogin'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fanampiana Bluetooth ho an'ny rafitra audiobook izay havoakan'i Kobo aloha. Izahay mitazona ny fanoherana rano IPX8 ary koa ny mampiavaka ny marika Fahazavana Light PRO sy TypeGenius, manambara fa ny Kobo Stylus dia hanomboka hamidy mitokana satria hifanaraka amin'ity Sage ity.
Hita izao avy amin'ny 289,90 euro ao amin'ny Fnac
Mandova ny endrika taloha fa misy a Efijery 7-inch izay mitazona 300 teboka isaky ny santimetatra miaraka amin'ny teknolojia E Ink Carta 1200 ihany. Manana fitahirizana 32GB mitovy izahay saingy ampiasain'ny processeur 1 GHz satria tsy hifanaraka amin'ny Kobo Stylus izany. Izy io dia manampy, eny, ny fifandraisana Bluetooth izay hamela ny fitantanana audiobooks, ary koa ny Fanoherana ny rano IPX8. Ity vokatra vaovao ity dia vidiana ambany noho ny Sage na dia mitovy endrika amin'ny famolavolana aza.
Hita izao avy amin'ny 189,90 euro ao amin'ny Fnac
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Sage sy Libra 2 dia mpamaky Bluetooth vaovao an'i Kobo
Nanavao ny elanelan'ny Chromebook i Acer ary nandefa vokatra lalao vaovao ao amin'ny #NextAtAcer